दिपक र मिलनको यस्तो चर्चा - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २०, २०७४ समय: २०:४७:०३
इटहरी / गायिका मिलन अमात्य र गायक दिपक लिम्बुले संयुक्त रुपमा केही गीतहरु गाए । एकल वा अन्य गायक / गायिकासँगका गीतहरुले चर्चा कमाएपनि उनिहरुको युगल गीतको त्यति चर्चा कमाउन सकेनन् । ‘यो जीवन तिमीलाई’, ‘यो मुटु माझ तिमीलाई राखें,’ ‘जीन्दगीमा सँधैभरि तिमै्र माया पाईरहुँ’ लगायतका मायाप्रेम झल्किने गीत गएपनि उनिहरुका चर्चामा आउन नसकेको मिलन–दिपक जोडी गीतले भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण सांगीतिक बजारमा चर्चाका पात्र बनेका छन् ।
सांगीतिक वृत्तमा चलेको गाईगुई अनुसार उनिहरु केही समयदेखि गहिरो प्रेम सम्बन्धमा थिए । आसाममा मिलन नेवारका नामले चिनिने उनि नेपाल आएर विवाह गरेपछि मिलन अमात्यका रुपमा सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चामा आईन् । यहि चर्चाले उनलाई देशविदेश पु¥यायो । विवाहपछि परिवारबाट छुटिएर कुलेश्वरस्थित अपार्टमेन्टमा श्रीमानसँग बस्दै आएकी मिलनले श्रीमानलाई अपार्टमेन्टबाट निकालेको गाईगुई छ ।
देशविदेशका सांगीतिक कार्यक्रममा सँगै जाँदा झ्याम्मेको मिलन र दिपकको प्रेम संगीतकर्मीहरुबीच ओपन सेक्रेट जस्तै छ । नेपाली तारा हुनु भन्दा अघि नै विवाहित दिपकको पनि श्रीमति र छोरा छन् । दिपक र मिलन दुवैलाई नेपालमा सँगै बस्न गाह्रो भएपछि उनिहरु क्यानाडा जाने योजनामा थिए । दिपक अहिले क्यानाडा पुगिसकेका छन्, मिलनको भने भिसा नलागेर नेपालमै रहेको उनकै सहकर्मीहरुबीच चर्चा छ । उनकै साथीहरु सुनाउँछन् ‘श्रीमानसँग विछोड गरेर दिपकसँग मिलन गर्ने योजना थियो, त्यो पनि भिसाले गर्दा बिछोड भयो ।’
‘द भ्वाईस अफ नेपाल’को ब्याटल राउण्डमा को-को परे ? कुन कोचको टिममा कति जना ? विस्तृतमा हेर्नुस्
सलमानविरुद्ध पुनः उजुरी
को होला प्रियंका कार्कीको ‘कालु’ ? भिडियोमा हेर्नुस्
प्रियंकाको बिकिनी तस्बिरमा गाली गर्नेलाइ जवाफ – ‘बन्द गर्नुस् रिस गर्न’
चलचित्र ‘छक्का पन्जा-३’को फस्टलुक पोस्टर सार्बजनिक
रिताले फेरी सफारीको ह्याण्डील समाउनु नपरोस !
परेड कार्यक्रममा आक्रमण आठ सैनिकको मृत्यु